Akwụkwọ sayensị akụkọ ifo, ịgagharị na ụdị a na akwụkwọ ya a na-agụkarị | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Akwụkwọ akụkọ sayensị
John Ortiz | | akụkọ sayensị emeghị eme, Ndị edemede, Novela
Njem njem na etiti ụwa.
Tinyere ụjọ na ịhụnanya, akwụkwọ akụkọ sayensị bụ n'etiti ndị kachasị ewu ewu. Ewere echiche bụ na mmalite ya sitere na 1920s dị ka ihe ziri ezi.Kpọmkwem, ruo n'afọ 1926, mgbe a malitere ibipụta magazin ahụ. Akụkọ ndị dị egwu. Ọ bụ ezie na nke a bụ oge mbụ na sayensị akụkọ ifo, ọtụtụ abanyelarị n'ime ụwa ndị a.
Okwu ahụ n’onwe ya bụ isiokwu nke ọtụtụ arụmụka yana ọgbaghara na nghọtahie. Malite n'ihi na ọ bụ mkpọda ma ọ bụ subgenre nke akụkọ ifo. Nke ahụ bụ ịsị, "akụkọ ifo" akụkọ ndị, n'ụzọ dị irè, na-arụ ọrụ n'otu ụzọ ahụ akwụkwọ akụkọ ịhụnanya ma ọ bụ ihe nkiri ezinụlọ si eme.
1 Sayensị akụkọ sayensị ka ọ bụ akụkọ sayensị?
2 Verisimilitude, nke mbụ
3 Sayensị sayensị, tupu akụkọ sayensị
4 Kedu akụkọ akụkọ sayensị
6 Njem na oge
7 Ise akwụkwọ akụkọ sayensị dị mkpa
7.1 Njem njem na Center nke ụwa, nke Jules Verne dere
7.2 Ngwa igwe, nke HG Wells dere
7.3 Otu Yankee na Arthlọikpe King Arthur nke Mark Twain dere
7.4 Fahrenheit 451, nke Ray Bradbury dere
7.5 Egwuregwu Agụụ, nke Suzanne Collins dere
Sayensị akụkọ sayensị ka ọ bụ akụkọ sayensị?
Maka ndị na-asụ Spanish, ọrụ ịkọwapụta akwụkwọ a na ịtọ ya oke nwere akụrụngwa ọzọ. Fọdụ na-ewere na "akụkọ sayensị" bụ oke ntụgharị asụsụ na ezighi ezi sayensị akụkọ ifo. Na ihe ziri ezi bụ "akụkọ sayensị." Okwu ndị ọzọ, obere okwu: ọ bụ maka ịkọ nkọ n'isiokwu dị iche iche, mana ịgbaso usoro sayensị tara akpụ.
Ọ bụ nkenke echiche ikpeazụ a - nke siri ike sayensị - nke mere ka ọ dị iche na ụdị akwụkwọ a na ihe dị egwu. Akụkọ sayensị - ma ọ bụ akụkọ sayensị, dị ka ịchọrọ - kwesịrị ịgbaso ma guzobe mgbagha. Speculative na ọbụna kediegwu, ma immovable. Akwụkwọ atụmanya na nchepụta echiche bụ ụfọdụ n'ime aha a na-etinye na ụdị a tupu ihe niile adị n'otu n'okpuru otu nche anwụ.
Verisimilitude, nke mbụ
Ndị na-akọ akụkọ sayensị na-akọ akụkọ anaghị ekwupụta n'ime ederede ha na ha na-akọ akụkọ akụkọ sayensị. Ọ bụ ezie na ha nwere ike ịdọ aka na ntị - na onye izizi, ịgwa ndị na-agụ ya okwu ozugbo ma ọ bụ site na agwa - na ihe ndị a bụ "ịtụnanya" na ọbụnadị "kediegwu", ha siri ọnwụ na echiche bụ na ihe a gwara bụ eziokwu.
Maka nke a, ha na-adabere na nkọwa nke echiche sayensị. Ha na-ewu iwu doro anya banyere otu ihe si arụ ọrụ ma rapara na ha. Nke a na-enye ha ohere ịmekọrịta mmekọrịta ha na ndị na-agụ ha.
Sayensị sayensị, tupu akụkọ sayensị
Ogologo oge tupu afọ iri nke abụọ nke narị afọ nke XNUMX, akụkọ akụkọ sayensị jupụtara na ya. Ihe na-adịghị adị bụ echiche ahụ. Enwere ike itinye aha dịka Edgar Allan Poe ma ọ bụ Tomás Moro n'ihe a maara dị ka "akụkọ sayensị sayensị". Ndepụta nke gụnyere ndị edemede dịka Sir Arthur Conan Doyle, Charles Dickens ma ọ bụ Johannes Kepler.
Ọ bụ ezie na e nweghị otu echiche ichepụta nkọwa nke ihe akụkọ sayensị bụ, ma ọ bụ kpọmkwem mmalite ya, o doro anya ihe ọ bụ. aha nke kere akụkọ ihe mere eme banyere ụdị ahụ na abụọ. Nke a bụ Frankenstein Onye Nkwalite nke oge a nke Mary Shelley dere.
Ihe na-emegiderịta onwe ya bụ na, n'afọ ndị na - adịbeghị anya - site na mmalite nke ụdị a - ogologo anụ a enwekwaghị nnukwu aha n'ime "Sci Fi". (Ọ bụ ezie na ọ bụ akụkọ ifo dị mkpa). Nye ọtụtụ ndị ọ bụ akụkọ ụjọ na ọ nweghị ihe ọzọ. Ọ bụ ezie na ọ na-egosipụtakarị mkpa ọ dị akụkọ ndị a na-egosi ma na-agbaso usoro sayensị ha nwere.
Kedu akụkọ akụkọ sayensị
Rọbọt, ndị ọbịa ma ọ bụ njem interspace. Ọ bụghị mgbe niile ka akụkọ sayensị na-akpali akpali. Ọ gụnyere nyocha nke ọdịdị mmekọrịta ọha na eze. Ihe atụ nke a bụ UtopiaNke Tomás Moro. Ederede nke ebipụtara na 1516 nke onye ọkà mmụta okpukpe Bekee na-eche banyere ọha mmadụ na-achịkwa site na nkwenkwe nkà ihe ọmụma nke ụwa oge ochie na n'okpuru okwukwe Ndị Kraịst.
Ebumnuche nke imeta ụwa n'etiti naanị ihe a na-apụghị imerụ emerụ adịwo na obere akụkọ olileanya. Otu n’ime ndị kacha mara amara bụ Achịcha elekere nke Anthony Burgess (1962) dere. Ndị na-agba ọsọ na-esonyekwa na ụdị nyocha a (nyocha). Ndi Androids Nrọ nke Atụrụ Eletriki? nke Philp K. Dick (1968) bụ ezi ihe atụ ọzọ.
Ngalaba ozo nke edemede a bu uchrony. Nke a bụ ụdị "Akụkọ ihe mere eme ọzọ", na-enyocha ohere ụfọdụ akụkọ ihe mere eme gosipụtara akara nke mmadụ ha gaara enwe mkpebi dị iche. Ihe omuma atu kacha mma amuru site na mkpado Dick. Ọ bụ ihe Nwoke no na ulo. Akwụkwọ akụkọ nke meriri ndị Allies na Agha Worldwa nke Abụọ, nke mere ka ndị Germany na ndị Japan kewaa ókèala nke United States.
Ọdịnihu dystopian bụ echiche ọzọ na-ekwughachi. Ọzọ ịchọ ọchụchọ maka ọha mmadụ zuru oke na-eweta ọdịda na-abụghị nke. Isi okwu a kachasị ewu ewu n'ime iri afọ abụọ mbụ nke XNUMXst narị afọ. Egwuregwu Agụụ nke Suzanne Collins (2008) na Dị iche Veronica Roth (2011) bụ ihe atụ abụọ nke a. Ọ bụ ezie na dystopia abụghị ihe ọhụrụ. 1984 nke George Orwell (1949) dere na 451 Fahrenheit Ray Bradbury's (1953) bu ezigbo ndi ochie.
Njem na oge
Nnyocha na-enweghị atụ maka ụmụ mmadụ, nke chọtara ụfọdụ placebo na akwụkwọ akụkọ sayensị. Echiche nyochara n'ụzọ zuru ezu n'oge na-adịbeghị anya na usoro TV German ọchịchịrị, nke Netflix mepụtara. Ihe ọtụtụ ndị amaghị bụ na igwe izizi nke gara njem na nhazi oge n'asụsụ Spanish.
Ọ bụ onye edemede Madrid bụ Enrique Gaspar onye "patented" otu n'ime ngwaọrụ ndị a tupu onye ọ bụla ọzọ. Mere ya na akwụkwọ akụkọ Anachronópete, bipụtara na 1887. Ederede nke ọtụtụ ndị mmadụ na-amaghị nke a na-amatabeghị n'ụzọ kacha mma. Nke a bụ obere n'ihi na ọ bụrụ na onye ode akwụkwọ a anwụghị, ọ ga-anwụ site na ejije ya na zarzuelas.
Ise akwụkwọ akụkọ sayensị dị mkpa
Ihe nkwuwa okwu. Họrọ akwụkwọ akụkọ akụkọ sayensị ise ma kpọọ ha "dị mkpa." N'eziokwu, enweghi ohere maka ndị ọzọ. N'ihi nke a, n'ụzọ na-enweghị isi - ma jiri naanị mmasị ederede (yana ihe a gụrụ) - a na-atụpụta ndepụta nke aha ise "pụtara ìhè" n'ime akụkọ edemede.
Njem njem na etiti ụwanke Jules Verne dere
Nwere ike ịzụta akwụkwọ ebe a: Njem njem na etiti ụwa
O nwere ndị ode akwụkwọ chọrọ nraranye pụrụ iche. Ihe naanị maka ha. Jules Verne dị n'ụdị ahụ. Họrọ otu akụkọ n’ime katalọgụ gị adịlarị egwu. Nke ahụ pụtara ịhapụ ọtụtụ ndị ochie. Mana anyị ga-eguzosi ike n'ime usoro sayensị anyị.
E bipụtara aha ahụ na Nọvemba 1864, ọtụtụ afọ tupu okwu ụgha sayensị emebere patenti. Ihe omuma ihe omimi nke nyeworo otutu ndi obi uto, na egwuregwu, ma dịkwa oke mkpa, Zipu okwu di iche iche banyere ihe ezoro ezo n'igwe edere.
Oge igwesite n'aka HG Wells
Nwere ike ịzụta akwụkwọ ebe a: Oge igwe
Onye edemede ọzọ dị mkpa mgbe ọ na-ekwu maka akụkọ sayensị. E wezụga nke ahụ onyinye ya pụtara ogologo oge tupu ọkọlọtọ nke echiche a. Agbanyeghi na amatara Enrique Gaspar dika onye izizi tinyere igwe njem oge na akuko ya, onweghi ihe ndia kariri nke a. Ọ bụ Herbert George Wells.
Ihe njem nke onye edemede London kwuru ma bipụtara na 1885, nwere ike imechu ọtụtụ ndị na-agụ ọgbọ ọhụrụ. Enweghị ihe mgbagwoju anya nke oge. Naanị ịkọ nkọ banyere omume ọma banyere otu ọha mmadụ ga-adị ma ọ bụrụ na ọ ga-atụ anya ihe omume ọ na-aga ime.
Otu Yankee na Kinglọikpe King Arthurnke Mark Twain dere
Nwere ike ịzụta akwụkwọ ebe a: Yankee na Courtlọikpe King Arthur
Ọbụna na narị afọ nke XNUMX, bipụtara ka afọ anọ gachara Oge igwe Ọdịmma. Ọ bụ akụkọ ọzọ dị iche na echiche puku afọ banyere njem oge na ọdachi na-akpata ọdachi.
Yankee dị na Ogige Eze Arthur.
Ọ bụ mkparị na-ekwu ihe ga-eme ma ọ bụrụ na nwoke nke oge a etinye onwe ya n'ụlọ ikpe nke Eze Arthur. N'etiti etiti oge na ndị ọzọ knights nke Now Table. Na mgbakwunye na agwa a nke na-eme njem na-enweghị atụ, ọ bụ ọkachamara na egbe.
451 Fahrenheitnke Ray Bradbury dere
Nwere ike ịzụta akwụkwọ ebe a: 451 Fahrenheit
Otu obodo nke amachibidoro akwụkwọ. Nke a yiri ka ọ bụ nrọ nke ọtụtụ ndị ọchịchị aka ike na ndị ọchịchị aka ike. Nakwa ndị na-eso ụzọ ya. Ọ bụkwa esemokwu ahụ e wuru ya 451 Fahrenheit nke Ray Bradbury dere.
E bipụtara na 1953, onye edemede America n'onwe ya kwetara na ya dere akụkọ a nke ukwuu banyere ihe McCarthy Era pụtara. Arụmụka na nchegbu nke, n'agbanyeghị agbanyeghị akụkọ sayensị, ọ ka dị ugbu a.
Egwuregwu Agụụnke Suzanne Collins dere
Nwere ike ịzụta akwụkwọ ebe a: Egwuregwu Agụụ
Ọtụtụ n'ime Best ere ákwà ihe fọdụrụ na narị afọ nke XNUMX bụ ihe ihere. Maka ọtụtụ ndị, ha bụ naanị obere ọrụ. Uru ya, na mgbakwunye na ire ọtụtụ nde, na-abịa na-atọ ọchị. Ajụjụ a na - ebilite mgbe nile n’azụ ụdị nkwupụta ndị a: ọ nwere ihe dị njọ na ndị na - agụ akwụkwọ ọbịa?
Agbanyeghị, Ihe omuma nke Collins, onye isi ya buru ulo ahia na 2008, biara iku ume ohuru obughi nani akwukwo akwukwo sayensi.. Ọzọkwa “tozuru oke” akụkọ banyere mmekọrịta ọyịgherenụ nke dị n’etiti ndị nọ n’afọ iri na ụma Ndị a malitere Edward Cullen na Bella Swan n'ime Uhienke Stephenie Meyer (2005) dere. Mmekọrịta nke onye ọ bụla ejighị kpọrọ ihe tupu ọdịdị Katniss Everdeen na Peeta Mellark.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » ụdịdị » akụkọ sayensị emeghị eme » Akwụkwọ akụkọ sayensị
Akwụkwọ akụkọ ịhụnanya
Peter Ustinov, ihe kariri omee. Akwụkwọ ya na ọrụ ya